Murashax Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur oo daboolka ka qaaday in Codadka Xildhibaanada la iibsanayo | Gaaloos.com
Home » Layaab » Murashax Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur oo daboolka ka qaaday in Codadka Xildhibaanada la iibsanayo
Murashax Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur oo daboolka ka qaaday in Codadka Xildhibaanada la iibsanayo
Murashaxa madaxtinimada Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inuu iminka soconayo olole ballaaran oo lagu kala iibsanayo Codadka Xildhibaanada Baarlamanka ee dooranaya madaxweynaha cusub.
Isagoo Saaka la hadlayay Warbaahinta ayuu Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur tilmaamay in qaar ka mid ah murashaxiinta ay ku howlanyihiin musuq-maasuq iyo Lacago ay siinayaan Xildhibaanada si ay Codadkooda uga iibsadaan marka doorashada la gaaro.
Xubnaha sidaasi samaynaya ayuu murashaxani ku sheegay inay u badanyihiin madaxda ugu sareysa dowladda uu waqtigeedu iminka dhamaaday ee Kumeel-Gaarka ah oo iyagu u taagan doorashada soo socota.
Cabdiraxmaan Cabdi-shakuur ayaa ka codsaday guddiga doorashada inuu u dhug-yeesho waxyaabaha ay ku kacayaan murashaxiinta qaarkood ee musuq-maasuqa ah. Isagoo ku eedeeyay madaxda dowladda KMG ee wali u taagan doorashada madaxtinimada inay adeegsanayaan Hantidii dalku lahaa isla markaana ay Guryihii dowladda sida Madaxtooyada iyo Golaha Wasiirada u isticmaalayaan goobo ay ololahooda doorashada Saldhig ugaga dhigaan.
Murashaxa hadalkan soo saaray ayaa ku jira 25 murashax oo ugu dambeyn uu guddiga doorashada madaxtinimadu Shalay u ogolaaday inay noqdaan kuwa u tartamaya doorashada ka gadaal markii lasoo gaba-gabeeyay diiwaan-galintii murashaxiinta oo tiradaas kusoo xirantay.
Title: Murashax Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur oo daboolka ka qaaday in Codadka Xildhibaanada la iibsanayo
Posted by Unknown, Published at 10:51 PM and have 0 comments